जेब्रा क्रसिङ बनाउन छैन बजेट | गृहपृष्ठ
Home विकास जेब्रा क्रसिङ बनाउन छैन बजेट
on: January 02, 2019 विकास
काठमाडौं (अस) । महानगरपालिकाले स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ बनाउने घोषणा गरिरहँदा सडक विभागको भने सामान्य जेब्रा क्रसिङ निर्माणका लागि पनि बजेट अभाव रहेको भनाइ बाहिर आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण समेत गरी सडक मर्मतका लागि विभागले जम्मा रू. ३ अर्ब ५० करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने, ‘देशभरि जताततैको सडक मर्मत त्यही बजेटबाट गर्नुपर्ने हुँदा समय–समयमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण गर्न बजेट अभाव छ ।’
सोमवार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षा’ विषयक छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा महानिर्देशक श्रेष्ठले उक्त समस्या सुनाएका हुन् । छलफलमा सांसदहरूले समय–समयमा जेब्रा क्रसिङ पेन्टिङ नहुनु पनि दुर्घटनाको एक प्रमुख कारण रहेको बताएका थिए ।
उनीहरूले सडक मर्मतका लागि उठेको कर कहाँ गयो भनी प्रश्न समेत उठाएका थिए । ‘गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन, इन्धन तथा टोल करबाट सडक मर्मतका लागि रू. २५ अर्ब उठेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर सबै पैसा नेशनल ट्रेजरीमा गई सीमित बजेट मात्रै निकासा हुने व्यवस्था भएका कारण सडक मर्मतका लागि उठाइएको सबै पैसा मर्मतका लागि छुट्टिँदैन ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. १९ करोड बजेट विनियोजन भएको सडक सुरक्षामा चालू आवमा रू. १६ करोड मात्रै विनियोजन भएको छ ।
सडक विभागले एक लेनका सडक नबनाउने
सवारी चाप तथा दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नयाँ बन्ने सडकहरू एक लेन माथिकै बनाउने नीति लिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत अब बन्ने सडकहरू भौगोलिक जटिलता रहेका पहाडी भेगमा पनि कम्तीमा पनि दुई लेनको बनाइने भएको हो । सडकसँगै पुलहरू पनि दुई लेनको बनाइने भएका छन् ।
तीन तहले सडकको बिजोग
काठमाडौंको तीनकुने नजीक लामो समयदेखि सडक मर्मत किन हुन नसेकेको भनी सांसद अनिल झाले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा महानिर्देशक श्रेष्ठले उक्त सडक संघीय सरकारको दायित्वभित्र नपर्ने बताए । देशभरका ८० हजार किलोमिटर सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटर मात्रै संघीय सरकारको दायित्वमा पर्दछ । बाँकी प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।
छलफलमा सांसदहरूले पहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सडक व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । राजधानीका सडकहरू राम्रो हुनुले समग्र देशभरिकै नागरिक र विदेशीहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कालीगण्डकी करिडोर स्तरोन्नति तीव्र, कालोपत्र गर्न सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिने
फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन हुने भएपछि स्थानीयवासी खुशी